anatod -Siko leSoftware yeSiko le-ISP
Ukusuka kwi-PyMEX ukuya kwi-PyME 2019
MUM Mikrotik Argentina 2018
MUM Mikrotik USA 2018
eCommerce Yiya 2018
MUM Mikrotik Argentina 2015
Isiko leSoftware yesiko le-ISP
Isiko leSoftware yesiko lolawulo, lokulawula kunye nokuhlawulisa ababoneleli beintanethi.
Sidibanisa zonke iintlobo zezisombululo zokulawula inethiwekhi yakho, i-DHCP, i-PPPoE, iiNdawo ezilula, iiHotspot, i-OLT, i-FTTx, iMikrotik, i-Ubiquiti, iMimosa, iHuawei.
AKUKHO BOTS, 100% HUMAN
Sixhasa i-100% yomntu, asisebenzisi iimpendulo ze-bots okanye ezenzekelayo.
Ungasinxibelelana ngeWhatsApp, iTelegram, iSkype, i-imeyile, umnxeba okanye umntu kwiofisi yethu.
Soloko umntu wenkampani eza kukunceda.
Isoftware yethu ilungiselelwe iimfuno kunye nemeko ye-ISP nganye.
Lonke uyilo ngesicelo luya kwenziwa ngokwemibandela enengqondo ngokwempawu zalo.
100% OWN UPHUHLISO
I-100% yekhowudi yethu kukuphuhliswa kwethu, okulungiselelwe kwiofisi yethu ngabaphathi beenkqubo zethu.
Asisiyo fektri yesoftware. Asisebenzisi isoftware yomntu wesithathu.
Siqinisekisa ukhuseleko kunye nokuthembeka kwimveliso yethu kunye nedatha.
Ungangena kwikhompyuter yakho, kwi-notebook, kwi-netbook, kwi-tablet, kwi-smartphone.
Isebenza kuzo zonke iinkqubo zokusebenza.
Uyilo oluhlengahlengisiweyo i100% kwiiselfowuni. Ngemisebenzi efanayo nenguqulelo yedesktop.
Ukunciphisa iphepha kwinkampani yakho.
Fumana zonke iinkqubo kwi-ISP yakho, ube yinkampani yedijithali ye-100%, ngaphandle kweprinta iphepha, kunye nesiginitsha yedijithali kubathengi bakho kunye ne-APP yeetekhnoloji zezitrato zakho.
Khohlwa iphepha, i-100% kwi-intanethi. Iingcali ziya kuba nenkqubo ehleliweyo yokusombulula imisebenzi eyabelwe imihla ngemihla. Idityaniswe neMephu zikaGoogle.
Siyinkampani Bahía Blanca, EArgentina Sineminyaka engaphezu kwe-10 yamava kwiinkqubo zophuhliso lweenkampani zonxibelelwano.
Sidibanisa neenkampani ezahlukeneyo ukwenza iintlawulo zabathengi zazo.
Abathengi bakho baya kuba nako ukufikelela kwinkqubo yokuzilawula apho banokufikelela khona kwiakhawunti yokujonga, ukwenza iintlawulo, ukujonga imeko yenkonzo, ukucela inkonzo yezobuchwepheshe, ukufumana izaziso zokutyhala.
Drago 23, Umgangatho 4, Of. 12
Bahía Blanca, B8000DCA
+54 9 291 5373762
NgoMvulo ukuya ngoLwesihlanu: 9: 00 - 17: 00 (GMT -3)
NgoMvulo ukuya ngoLwesihlanu: 7 am - 3 pm (GMT -5)
© anatod ® - 2019
Sisebenzisa ii-cookies zethu kunye neyesithathu ukuphucula iinkonzo zethu kwaye sikubonise ukukhangisa ezihambelana nokukhetha kwakho ngokuhlaziya imikhwa yokukhangela. Ukuba uqhubeka uphequlula, sicinga ukuba uyayisebenzisa. ukwamukela
Le webhsayithi isebenzisa ikhukhi ukuphucula amava akho ngelixa uhamba ngewebhusayithi. Ngaphandle kwezi khukhi, ii-cookies ezikwahlukileyo njengoko ziyimfuneko zigcinwa kwisiphequluli sakho njengoko zibalulekile ekusebenzeni kwezixhobo ezisisiseko zewebhusayithi. Sisebenzisa kwakhona ii-cookies zenkampani ezithathu ezisinceda sihlalutye kwaye siyiqonde indlela oyisebenzisa ngayo lewebhu. Ezi khukhi ziya kugcinwa kwisiphequluli sakho kuphela ngemvume yakho. Kananjalo unakho ukhetho lokuphuma kulezi cookies. Kodwa ukuphuma kwezinye zeekhukhi kunokuba nempembelelo kwimeko yakho yokukhangela.